Akhriro: Wararkii ugu xiisaha badnaa ee Todobaadkan laga qoray Soomaaliya – Bandhiga
Akhriro: Wararkii ugu xiisaha badnaa ee Todobaadkan laga qoray Soomaaliya
Todobaad walba maalinkasta oo Jimco ah waxaan idiin soogudbin doonaa oo aad kaga bogan kartaa Bogga Bandhiga Media wararkii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalka oo aan ugu magic darnay Ogaalka Bandhiga Media.
La-wadaag asxaabta si ay kaga boqgtaan wararka ugu muhiimsan ee dalka.
December 8, 2018: Dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciidan dheeraad ah u soo direyso Soomaaliya:
Ciidan hor leh oo katirsan kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM ayaa la sheegay iney soo gaari doonaan dalka,kadib war ka soo yeeray todobadkan bilowgiisa Taliyaha Guud ee Ciidanka Difaaca Uganda DavidMuhoozi.
Taliyaha oo ciidamadan la dardaarmayay ayaa sheegay in Al-shabaab lala dagaallami karo lagana adkaan karo, haddii Ciidamada ay u dhaqmaan sida loo tababaray.
Ciidamada Uganda ee ku biiraya Howlgalka AMISOM ayuu sheegay in ay qaateen tababar lix bilood ah oo ah sida loo dagaallamo, la isu difaaco, loona fuliyo howlgallada.
December 8, 2018: Beelo daga gobalka Sool ayaa lagu heshiisiiyay magaalada Jigjiga:
Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad Degaanka Soomaalida waxaa heshiis ku kala saxiixdaylabo beelood oo bishii la soo dhaafay ku dagaallamay degaanka Dhumay ee GobolkaSool.
Heshiiskan ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay isku afgarteen wakiillada labada dhinac,kuwaas oo si wada jir ah u saxiixay.
Qodobada heshiiskan ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in qoladii weerar ku qaadda Magaalo ay deggantahay beesha kale in laga qaado lacag dhan $100,000 (Boqol Kun ) oo doollarka Mareykanka ah.
December 8, 2018: Kulan looga hadlayo ka hortaga tacadiyada loo geysto Haweenka ayaa Muqdisho lagu qabtay:
Waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kulan looga hadlayo tacadiyadda Haweenka loo geysto iyosidii looga hortagi lahaa, waxaana ka soo qeyb galay mas’uuliyiin kala duwan ooka socota dowladda Soomaaliya iyo ururada u dooda xuquuqda Haweenka.
Waxaa Shirkani soo abaabulay haweenka Baarlamaanka Soomaaliyeed ee labada Aqal kan golaha shacabka iyo Aqalka Sare, waxa uuna ku soo aaday iyadoo lagu guda jiro xuska maalmaha tacadiyada haweenka oo 16 maalin ah
December 8, 2018: Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa ka hor yimid kala diristii guddiga Maaliyadda:
Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdi Raxmaan ayaa sharci darro ku tilmaamaykala diristii Guddiga Maaliyadda ee Golaha shacabka oo uu dhawaan kala diray kuxigeenkiisa 1aad.
Maxamed Mursal Sheekh C/Raxmaan ayaa sidoo kale amray in Guddiga ay sii wataan shaqadooda.
Guddoomiyaha ayaa maalmihii la soo dhaafay wadaya la tashiyo uu la sameynayay xubnaha Guddiga maaliyadda oo laftooda kala qeybsanaa,waxaana maanta baaqday kulankii 31aad ee Golaha shacabka.
December 9, 2018: Xeebaha Soomaaliya ayaa lagu qabtay hub sharci darro ah:
Markab ka mid ah kuwa Badda Ciidamada Dalka Hindiya ayaaxeebaha Soomaaliya ku qabtayHub iyo Rasaas farabadan.
December 9, 2018: Madaxweyne Farmaajo ayaa dhagax dhigay dhismaha Madxafka Qaranka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka SoomaaliyaMaxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay u bilaabay ololaha Isxilqaan ayaa waxa uudhagax-dhigay Madxafka Qaranka.
Waxaa Munaasabada dhagax dhigga sidoo kale ka soo qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir,Wasiirada Maaliyadda iyo Boostada iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in Madaxafka Qaranka dib u dhis lagu sameyn doono dhawaan iyadoo Maamulka gobolka Banaadir uu ka raray Dad Shacba ah oo deganaa tan iyo burburkii dalka ee dagaalada sokeeye ay ka dhaceyn.
December 9, 2018: Dowladda Shiinaha ayaa Markab dagaal u soodirtay xeebaha Soomaaliy
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in Markab ka mid ah kuwa dagaalka, sidoo kalenaDiyaaradaha qaada u soo dirtay Soomaaliya si uu qeyb uga noqdo howlgalka kadhanka ah Burcad badeedda iyo ilaalada Maraakiibta Ganacsiga ee maraya Biyaha Soomaaliyaiyo Gacanka Cadmeed.
Markabkan oo ah midka 31aad ee Ciidanka Badda dalka Shiinaha ayaa ka soo amba baxay Magaalada Zhanjiang ee Koofurta Dalkaasi.
Markabka ayaa howlgalkiisa biyaha Soomaaliya bilaabay Axadda maanta ah,waxaa uu qaadaa Maraakiibta yar yar,diyaaradaha dagaalka iyo Gantaallada qaar.
Waxaa la socda 700 oo Saraakiil iyo Ciidan isugu jira,waxaa kale oo uu wadaa 3 diyaaradood oo kuwa Helicopters-ka ah, iyo ciidamo si gaar ah u tababaran.
December 9, 2018: Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Golaha Shacabka ayaa Mooshin xil ka qaadis ah ka gudbiyay Madaxweyne Farmajo:
Soo jeedin xil kaqaadis ah oo ay gudbiyeen 92xildhibaan oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay 5 eed oo sababtay in aysoo jeediyaan hindise xil kaqaadid madaxweyne.
Xafiiska guddoomiyaha golaha Shacabka Maxamed Mursal ShCabdiraxman ayaa sheegay in uu diiwaangeliyey Soo jeedinta xil kaqaadidda madaxweyne Farmaajo.
December 10, 2018: Golaha Iskaashiga maamul goboleedyada ayaa soodhaweeyay Mooshinka laga keenay Madaxweyne Farmaajo.
War-saxaafadeed ka soobaxay Golaha Iskaashiga DowladGoboleedyada Soomaaliyeed ayaa looga hadlay Mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed CabdullahiFarmaajo, waxaana ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan iyagoo dul istaagayqodabada lagu eedeeyay madaxweynaha.
December 10, 2018: Soomaaliya ayaa shirka AQAB kaga qeyb gashaydalka Jordan:
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya MahdiMaxamed Guulleed Khadar ayaa dalka Jordankula kulmay xoghayaha amniga gudahaMaraykanka, Kirstjen Nielsen.
“Waxaa si guul ah noogu soo idlaaday shirkii uumarti geliyay boqorka Jordan ee iskaashiga caalamka ee la dagaalankaAl-shabaab”, ayuu yiri RW ku-xigeenka Soomaaliya.
December 10, 2018: Banaabax lagu taageerayo Madaxweyne Farmajoayaa ka dhacay Muqdisho
Shacab farabadan ayaa isugu soo baxay wadooyinka Waaweyn ee Magalada Muqdisho,kuwaa ooka soo horjeeda mooshinka Xildhibaano katirsan Golaha Shacbaka ka gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo.
Degmooyinka Gobolka Banaadir oo ay ka yimaadeen dadkan ayaa laga dareemayaa sida ay u rabaan hogaanka madaxweyne Farmajo una badan dhalinyaro iyagoo ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin Mooshin dooni meyno, doolar qaate dooni meyno iyo qaran dumis dooni meyno.
Qeybo ka mid ah wadada Soddonka iyo Maka Almukarama ayaa dadweynaha lagu arkayaa,kuwaas oo gacmaha kor u taagaya kana soo horjeedaan mooshinka.
December 10, 2018: Ifraax Foundation iyo Global Media oo xusaymaalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha:
Xuska maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ah mid bulshada looga wacyigalinayaay ilaaalinta iyo dhowrida xaquuqda aadanha iyo In la joojiyoxadgudubyada ka dhanka ah Aadanaha, 10 Dec 1948 ayeey dunida isla garatay inmaalinkan loo asteeyo maalinta xuquuqul Aadanaha Caalamka.
Ifrah Foundation Waxay kor u qaadaa una doodaa dadka dulman ee codkooda la maqlin iyadoo wada shaqeyn la leh Global Media campaign waxaana ay soo bandhigeen Sanadkan dhacdooyin soomaaliya ka dhacay, xadgud aad u weyn oo dhinaca xuquuql insaanka tusaale iyagoo tusaale ahaan u soo qaadanaynaa labadii dhacdo ee ugu waa weynayd.
Waxaa jirtay ineey soo shaac bixiyeen gabar yar oo lagu xadgudbay xuquuqda laguna sameeyey gudniin iyadoo la sheegay in ay u dhimatay dhiig bax goobta waxaa gaartay Ifraax Axmed madaxa Ifraax foundation si ay arintaasi u soo xaqiijiso.
December 10, 2018: Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in Guddiga maaliyadda aanu aqoonsaneyn:
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa war ka soo saaray habka uu u shaqeynayogolaha shacabku inta lagu jiro kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhashay kala diristii guddiga maaliyaddaiyo habka loo maareynayo doorashada dowladgoboleedka KGS.
Mahad Cabdalla Cawad oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ay todobo Qodob ka soosaareen habka shaqada ee shaqaalaha golaha shacabka iyo Xarunta Villa Hargeysa ee ay ku shiraan Guddiyada joogtada ah.
December 10, 2018: Madaxweyne Farmaajo ayaa qaabilay safiirada cusub ee Turkiga iyo Sudan:
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka SoomaaliyaMudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaawarqadaha aqoonsiga ka guddoomayDanjireyaasha cusub ee dalalka Turkiga iyoSuudaan ee Soomaaliya.
December 10, 2018: Ra’iisul wasaare Khayre ayaa shir gudoomiyay shirkatoddobaadlaha ah ee Tubta Amniga iyo Caddaalada iyo Tubta siyaasada loodhanyahay.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda fedraalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaamaanta guddoomiyay shirararka toddobaadlaha ah ee Tubta Amniga iyo Caddaaladaiyo Tubta siyaasada loo dhanyahay.
December 11, 2018: Soomaaliya ayaa shatiyo kallumeysi siisay kaluumelysato Ajaanib ah:
Soomaaliya markii uguhorreysay muddo 30 sano ah kadib si daahfuran u bixisay shatiyokalluumeysi oo lasiinayo iskaashatooyin ka soo jeedo dalka Shiinaha.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, Cabdillahi Bidhaan Warsame ayaa saxiixay shatiyadaasi oo la siin doono iskaashatada COFA ee dalka Shiinaha oo ah 32 (Shati).
Hal milyan oo Doolar-ka Mareykanka ah ayaa lagu bixiyey 32-da shati ee ay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda saxiixday.
December 11, 2018: Mooshinkii laga keenay madaxweyne Farmajo ayaa buray?
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Xoghayaha Golaha Shacabka Cabdi Kariin Buux ayaa lagu xaqiijiyay in uu buray mooshinkii laga keenay MadaxweyneFarmaajo.
Sababta uu mooshinka u jabay ayaa lagu sheegay kadib markii tiradii sharciyan loo baahnaa ee Xildhibaanada aysan gudbin mooshinka.
Warka qoraalka ah ayaa lagu sheegay in Xildhibaanogaaraya 14 Mudane inay soo gudbiyeen dacwad ah in laga been abuurtayMagacyadooda,isl markaana hadii laga jaray 92 Xildhibaan ay soo hartay 78Mudane oo aan sharci aheyn inay moohsin ka keenaan Madaxweynaha.
December 11, 2018: Hay’adda IMF ayaa amaantay hanaanka maaliyadeed ee dalka.
Warbixin ay soo saartay Hey’adda Lacagta Adduunka oolagu daabacay bogga rasmiga ah ee hey’adda IMF, ayay ku sheegtay Soomaaliya iyo hey’adda ay gaaareen heshiis looga gudbayo dib u eegistii koowaad ee wajigasadaxaad ee kooxda la socodka barnaamijka Soomaaliya.
December 11, 2018: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa mooshinka Madaxweyne Farmajo ka xumaaday
Madaxweyni hiihore ee Soomaaliya Mudane CabdiqaasimSalaad Xasan oo la hadlay WarbaahintaQaranka isagoo ku sugan magaalada Qaahiraee Dalka Masar ayaa wuxuu sheegay inwadanka uu ka jiro isbadal balaaran loonabaahanyahay in dalka aanan dib loocelin.
Shirka sanadeedkii labaad ee Haweenka Xildhibaanada ah ee heer federaaliyo heer dawlad goboleed ayaa Muqdisho lagu qabtay:
Shir Sanadeedkii labaad ee Haweenka Xildhibaanada ah ee heer federaal iyo heer dawladgoboleed ayaa maanta ka furmay Magaaladda Muqdisho, waxaana daah furay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Barlamaanka federaalka ah eeSoomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
December 12, 2018: Bixinta Baasaboorka Soomaaliga ayaa dib loobilaabay todobaadkan:
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo JinsiyadaSoomaaliya Maxamed Aadan(Koofi) ayaa sheegay indib u habeyn lagu sameynayayhababka loo bixiyo baasaboorka oo muddo koobanhakad galay.
December 12, 2018: Soomaali muddo ku xirneyd dalka Tanzania ayaa Muqdisho lagu soo celiyay
Ergayga xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya uqaabishan muhaajiriinta, qaxootiga iyoxaquuqda caruurta, Maryam Yaasiin XaajiYuusuf, iyo mas’uuliyiin kale ayaagaroonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaankusoo dhaweeyay mawaadiniinSoomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyada dalkaTanzania.
December 12, 2018: Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo ka hadlay mooshinka kana guuray madaxtooyada:
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed Mudane Mursal SheekhCabdiraxman ayaa la xaqiijiyayin uu ka guuraty xarunta MadaxtooyadaSoomaaliya, kadib markii uu cadaadis kalakulmay madaxda dalka sida ay sheegayaan wararka.
Wararka waxey sheegayaan in uu u guuray Hoteel ku yaalla Agagaarka Garoonka Aadan Cadde, islamarkaana uu halkaasi ku qaabili doono Xildhibaanada Mooshinka wadda.
Sidoo kale Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/Raxmaan ayaa beeniyay in uu buray Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
December 12, 2018: Golaha Aqalka Sare oo Ansixiyay Hindise-sharciyeedka dhismaha Hay’adda Golaha Naafada Qaranka.
Kalfadhiga 4-aad kulankiisa 11-aad ee xildhibaannada eeGolaha Aqalka sare ay ku yeesheenxarunta Golaha Aqalka sare ayaa ahaaajandaha Aqrinta labaad eehindise-sharciyeedka dhismaha Hay’adda Golaha NaafadaQaranka.
December 13, 2018: Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay mooshinka laga keenay Madaxweynaha:
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi MaxamedGuuleed oo ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya MaxamedCabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu buray mooshinka.
Mahdi Guuleed, waxa uu xusay in wax sahlan aysan aheyn in xilka laga qaado madaxweynaha Soomaaliya, isaga oo sheegay in loo baahan yahay baaritaanka eedeymaha madaxweynaha loo jeediyay.
December 13, 2018: Mukhtaar Roobow ayaa lagu xiray magaalada Baydhabo:
Ilo ku dhow Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo lagu kalsoo naan Karo ayaa sheegaya in xariggiisa uu ahaa qaab shirqool ah.
Waxaa ay sheegeen in Mukhtaar uu ka mid ahaa musharrixiinta Koofur Galbeed oo lagu ballamiyay Madaxtooyada maamulkaas.
Inta badan Musharrixiinta madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa waxaa ballamiyay C/Qaadir Shariif Sheekhunaa oo ah ku simaha Madaxweynaha sidoo kalena ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed.
December 13, 2018: Madaxweynaha Ereteria ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho,Madaxweynaha dalka Ereteriya Mudane Isaias Afwerki iyo wafdi uu hoggaaminayo.
Sidoo kale, kumannaan shacab ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha caasimadda si ay u soo dhaweeyaan Madaxweyne Isaias Afwerki iyo wafdigiisa, iyagoo ku dhawaaqayey hal-ku-dhigyo ay ku muujinayeen xiriirka ka dhaxeeya labada shacab
December 13, 2018: Soomaaliya iyoQatar ayaa kala saxiixday heshiisyo muhiim ah:
Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa magaalada Dooxaku kala saxiixday shan heshiis iyo Sedex is-afgarad oo khuseeya arrimhamaalgashiga, ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha.
Heshiisyada waxaa sidoo kale kamid in diyaaraddaQatar airways ay billaawdo bartamaha sannadka 2019 duullimaado ay ku imaanaysomagaalada Muqdisho.
December 13, 2018: DowladdaSoomaaliya ayaa ka hadashay sababta loo xiray Mukhtar Roobow:
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay xarigga Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
War ka soo baxay Wasaaradda amniga ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay Roobow uusan ka tanaasulin fikirkii uu uga midka ahaa Al-shabaab iyo in uu ciidan abaabulay.
Wasaaraddu waxaa kale oo ay sheegtay in MukhtaarRoobow uusan dhaqan gelin heshiisyadii uu la galay dowadda ee ay ka midkaahaayeen in uu caddeeyo fakarkiisa la xiriira Argagixisanimada iyo uu taageeroDowladda Federaalka ah.